Maktabadda Mawduuca: Waa Maxay? Iyo Sababta Istaraatiijiyadda Suuqgeynta Mawduucu U Fashilmay La'aantood | Martech Zone
Sanado ka hor waxaan la shaqeyneynay shirkad dhowr milyan oo maqaallo ah lagu daabacay boggooda. Dhibaatadu waxay ahayd in aad u yar qodobbada la akhriyay, xitaa kuwan ka hooseeya mashiinnada raadinta, iyo in ka yar boqolkiiba hal iyaga ka mid ah ayaa dakhli loo aaneeyey iyaga.
Waxaan kugula tartami lahaa inaad dib u eegto maktabaddaada nuxurka ah. Waxaan aaminsanahay inaad layaabi laheyd boqolkiiba boqolkiiba bogagaaga ay runti caan ku yihiin oo ay ku mashquulsan yihiin dhagaystayaashaadu, iyadoo aan la xusin boggaga ku kala sarreeya makiinadaha raadinta. Waxaan badanaaba ogaannaa in macaamiisheenna cusub ay ku kala sarreeyaan shuruudo summad leh oo keliya, isla markaana ay kumaan kun oo saacadood ah ku qaateen waxyaabo aan cidina akhriyin.
Macmiilkan gaarka ahi wuxuu lahaa shaqaale tifaftiran oo buuxa oo leh tifaftirayaal iyo qoraayo… laakiin istiraatiijiyad dhexe oo ay ku lahaan karaan ma aysan lahayn waa maxay in la qoro. Waxay si fudud wax uga qoreen maqaallada shaqsiyan ay xiisaha ka heleen. Waxaan baarnay waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxaanan ka helnay arrimo quseeya… waxaan ka helnay maqaallo badan oo ka yimid maqaallo kala duwan oo isla mowduuc ah. Kadibna waxaan helnay tan maqaallo ah oo aan darajayn, lahayn wax hawlgelin ah, oo si liidata loo qoray. Xitaa waxay lahaayeen xoogaa adag sida loo maqaallo aan xitaa lahayn sawirro ayaa lagu daray.
Markiiba kumaanaan talin xalka. Waxaan weydiinnay haddii aan sameyn karno barnaamij tijaabo ah oo aan ku dabaqnay 20% ilaha qolkooda wararka si loo hagaajiyo loona isku daro waxyaabaha jira halkii aan ka qori lahayn waxyaabo cusub.
Ujeeddadu waxay ahayd in la qeexo a maktabadda - ka dibna hal maqaal oo dhameystiran oo dhameystiran ku saabsan mowduuc kasta. Waxay ahayd shirkad waddani ah, sidaa darteed waxaan ku baarnay mawduuca anagoo ku saleyneyna dhagaystayaashooda, darajooyinkooda raadinta, xilliyeedka, goobta ay ku sugan yihiin, iyo tartamayaasha la tartamaya. Waxaan soo bandhignay liis qeexan oo ka kooban, loo qorsheeyay bille, kaas oo mudnaanta laga siiyay cilmi-baaristayada.
Waxay u shaqeysay sidii soojiidasho. 20% ee kheyraadka aan codsanay si aan u dhisno maktabad nuxurkeedu dhammaystiran yahay ayaa ka fiicnaatay 80% waxyaabaha kale ee sida khaldan loo soo saaray.
Waaxda qoraalka ayaa laga beddelay:
Intee in le'eg ayaan soo saaraynaa toddobaad kasta si aan ula kulanno yoolalka wax soo saar?
Oo loo wareejiyay:
Mawduuc noocee ah ayaa habboon in la isku hagaajiyo oo la isku daro marka xigta si loo kordhiyo soo noqoshada maalgashiga maaddada?
Ma ahayn wax fudud. Waxaan xitaa dhisnay mashiin weyn oo falanqeynaya xogta si loo aqoonsado nidaamka mudnaanta leh ee soosaarka maaddada si loo hubiyo inaan helnay ROI ugu wanaagsan ee ku saabsan ilaha macluumaadka. Bog kasta waxaa lagu sifeeyay ereyga muhiimka ah, ereyada muhiimka ah ee loo kala saaray, juqraafi (haddii la bartilmaameedsaday), iyo taxonomy. Kadib waxaan aqoonsanay waxyaabaha kuqoran shuruudaha tartanka - laakiin sifiican uma kala saarin.
Si xiiso leh ayaa ku filan, qorayaasha iyo tifaftirayaasha sidoo kale way jeclaayeen. Waxaa la siiyay mowduuc, waxyaabaha jira oo ay tahay in loo weeciyo maqaalka cusub ee dhameystiran, iyo sidoo kale waxyaabaha ku tartamaya ee ka socda webka. Waxay u siisay dhammaan cilmi-baaristii ay u baahnaayeen inay ku qoraan maqaal aad uga wanaagsan, qoto-dheer soo jiidasho leh.
Maxay Tahay Inaad Dhisato Maktabad Mawduuc ah
Waa kuwan fiidiyow hordhac ah oo kooban oo ku saabsan waxa maktabaddu ka kooban tahay iyo sababta istiraatiijiyadda suuq-geynta ay u tahay inay ku darsato qaabkan
Shirkado badan ayaa uruuriya maqaallo ku saabsan mowduucyo la mid ah waqti ka dib, laakiin booqdaha bartaada ma gujinayo oo u socdo si uu u helo macluumaadka ay u baahan yihiin. Waa lama huraan inaad mowduucyadan isku darto mid, dhammaystiran, oo habaysan Master maqaal ku saabsan mawduuc kasta oo dhexe.
Sida loo qeexo Maktabadda Mawduucaaga
Badeecadaada ama adeeggaaga, istiraatiijiyaddaada mawduucu waa inay ku lug yeelato heer kasta oo ka mid ah safarka iibsadaha:
Aqoonsiga Dhibaatada - ka caawinta macaamilka ama ganacsigu inay si fiican u fahmaan dhibaatadooda guud ahaan iyo sidoo kale xanuunka ay kuu keenayso adiga, qoyskaaga, ama ganacsigaaga.
Sahaminta Xalka - ka caawinta macaamilka ama ganacsigu inuu fahmo sida dhibaatada loo xallin karo. Laga soo bilaabo fiidiyow 'sidee-to' iyada oo loo marayo alaab ama adeegyo.
Shuruudaha Dhisida - ka caawinta macaamilka ama ganacsigu inay fahmaan sida si buuxda loogu qiimeeyo xal kasta si loo fahmo waxa iyaga ugu fiican. Tani waa marxalad aad u wanaagsan oo aad ku muujin karto kala duwanaantaada.
Xulista Alaab-qeybiye - ka caawinta macaamilka ama ganacsiga inay fahmaan sababta ay u dooranayaan adiga, meheraddaada, ama alaabtaada. Tani waa halka aad rabto inaad ku wadaagto khibradaada, shahaadooyinka, aqoonsiga dhinac saddexaad, markhaatiyada macaamiisha, iwm.
Ganacsiyada, waxaad sidoo kale dooneysaa inaad ka caawiso qofka wax baaraya inuu fahmo sida loo ansaxiyo mid kasta oo ka mid ah tartamadaada oo uu ku hor dhigo kooxdooda si loo dhiso is afgarad.
Qaybaha kuwaas oo loo qaabeeyey sifiican oo fudud si looga boodboodo min cinwaan ilaa cinwaan hoosaad.
Research laga bilaabo ilaha aasaasiga ah iyo kuwa sare si loo siiyo kalsooni waxyaabahaaga.
Liisaska dhawaaqa iyadoo qodobbada muhiimka ah ee maqaalka si cad loo sharaxay.
Muuqaal. Sawir-gacmeedka wakiil ee wadaagga, jaantusyada, iyo sawirrada meel kasta oo suuragal ah inta lagu jiro maqaalka oo dhan si si fiican loogu sharraxo loona dhiso faham. Micrographics iyo infographics ayaa xitaa ka fiicnaa.
Fiidiyow iyo Cod si loo bixiyo dulmar guud ama sharrax kooban oo ku saabsan waxa ku jira.
La shaqeynta macmiilkeena, a erey-tirinta ma ahayn ujeeddada kama dambaysta ah, qodobbadaasi waxay ka socdeen dhowr boqol illaa dhowr kun oo eray. Maqaallo duug ah, gaagaaban, oo aan la aqrin ayaa la tuuray waxaana loo weeciyay maqaallada cusub, ee hodanka ah.
Backlinko wuxuu falanqeeyay in kabadan 1 milyan oo natiijo wuxuuna helay iskucelceliska # 1 bogga qiimeynta oo leh 1,890 erey
Xogtaani waxay taageertay hordhacayaga iyo natiijooyinka aan helnay. Waxaa gebi ahaanba loo beddelay sida aan u eegno dhismaha xeeladaha nuxurka macaamiisheenna. Mar dambe ma sameynayno farabadan cilmi baaris iyo soosaarid maqaallo ah, sawirro iyo caddaan dambe. Waxaan si ula kac ah u qorshaynay a Maktabadda macaamiisheenna, u hubinta waxyaabaha ay hadda ka kooban yihiin, isla markaana mudnaanta siiyaan meelaha bannaan ee ka bannaan.
Xitaa on Martech Zone, waxan sameyneynaa. Waxaan ku faani jiray inaan haysto wax ka badan 10,000 oo qoraal. Ma ogtahay waxa Waxaan ku jarjarnay blog-ka illaa 5,000 oo farriimo ah waxaanan sii wadnaa inaan dib ugu laabanno toddobaad kasta oo aan kobcinno qoraalo duugoobay. Sababtoo ah si aad ah ayaa loogu beddelay, waxaan dib ugu daabacaynaa sidii cusub. Intaa waxaa sii dheer, maxaa yeelay waxay had iyo jeer horay u qiimeeyaan oo ay leeyihiin xiriiriyayaal gadaal iyaga ah, waxay ku sii kordhayaan natiijooyinka mashiinka raadinta.
Ku Bilaabida Istaraatiijiyadda Maktabadda Mawduucaaga
Si aan u bilaabo, waxaan kugula talin lahaa inaad qaabkan qaadato:
Maxay yihiin rajooyinka iyo macaamiisha ku baaraya khadka tooska ah ee ku saabsan marxalad kasta oo safarka iibsadaha ah taasi ayaa u horseedi lahayd adiga ama tartamayaashaada?
Waa maxay dhexdhexaadin waa inaad ku dartaa? Mawduucyada, sawir gacmeedyada, waraaqaha shaqada, waraaqaha cad, daraasaadka kiisaska, markhaatiyada, fiidiyowyada, fiidiyowyada, iwm.
Waa maxay hadda waxyaabaha aad ku hayso boggaaga?
Waa maxay cilmi Miyaad dhex galin kartaa maqaalka si aad u xoojiso oo aad u shakhsiyeeyo waxa ku jira?
Marxalad kasta iyo maqaal kasta, muxuu sameeyaa mashiinka raadinta tartamayaashamaqaallada ayaa u eg? Sideed si ka fiican u qaabeyn kartaa?
Wax ka qorista aadshirkadda r toddobaad kasta ma shaqeynayso. Waa inaad wax ka qortaa rajooyinkaaga iyo macaamiishaada. Soo-booqdayaashu ma rabaan inay noqdaan iibin; waxay rabaan inay cilmi baaris sameeyaan oo caawimaad helaan. Haddii aan iibinayo madal suuq geyn ah, maahan oo keliya waxa aan ku guuleysan karno ama waxa ay macaamiisheennu ku dhammaystirayaan barnaamijka. Waa sida aan u beddelay xirfadda macmiilkayga iyo meheradda ay ka soo shaqeeyeen.
Caawinta macaamiishaada iyo rajadaadu waa waxa ku kallifaya dhagaystayaashaada inay aqoonsadaan khibrad iyo awood ay ku leeyihiin warshadaha. Mawduucuna kuma koobnaan karo sida alaabadaada iyo adeegyadu u caawiyaan macaamiishaada. Xitaa waxaad xitaa ku dari kartaa maqaallada ku saabsan qawaaniinta, shaqaalaynta, isku dhafka, iyo gabi ahaanba mowduuc kale oo rajadaadu ay kula legdanayso shaqada.
Sida Loo Baadho Mawduucyada Mawduucyadaada
Had iyo jeer waxaan ku bilaabaa seddex ilo cilmi baaris oo ku saabsan waxyaabaha aan horumariyo:
Cilmi baaris dabiici ah Xeebaha si loo garto mowduucyada aadka loo baadhay iyo qodobbada la xidhiidha rajada aan doonayo inaan soo jiito. Hayso liistada maqaallada darajooyinka waxtar leh, sidoo kale! Waxaad ubaahantahay inaad isbarbar dhigto maqaalkaaga si aad u hubiso inaad kafiican tahay iyaga.
Cilmi-baaris bulsho wadaag ah oo ka socota BuzzSumo. BuzzSumo waxay la socotaa inta jeer ee maqaallada la wadaago. Haddii aad kala goyn karto caannimada, wadaagga, oo aad ku qori karto maqaalka ugu fiican mawduuca - fursadahaaga aad ku soo saari karto ka qaybqaadashada iyo dakhliga ayaa aad uga sarreeya. BuzzSumo ayaa qortey maqaal aad u fiican dhowaan sida loo isticmaalo Falanqaynta Mawduuca.
Hufan falanqaynta taxonomy si loo hubiyo in maqaalkaagu uu daboolayo dhammaan mawduucyada la xidhiidha mawduuca. Baadhid Ka jawaab dadweynaha cilmi baaris yaab leh oo ku saabsan taxonomy-ka mawduucyada.
Samee liis aad u ballaaran oo mawduucyadan ah, kala mudnaanta koowaad u siiya sida ay muhiim u tahay, oo bilow baaritaanka bartaada. Ma haysaa waxyaabo taabanaya mawduucaas? Ma haysaa waxyaabo ku taxan ereyada muhiimka ah ee la xiriira? Haddii la horumarin karo - dib u qoro maqaallo hodan ah, oo dhammaystiran. Kadib wax ka qabta waxyaabaha ka caawinaya rajadaada iyo macaamiishaada xiga.
Ku dhis jadwalkaaga jadwalkaaga mudnaanta. Waxaan kugula talin lahaa inaad kala qaadatid waqtiga u dhexeeya cusbooneysiinta hore iyo qorida cusub ilaa maktabadaada laga dhameystirayo. Mahadnaqa badalida jawiyada ganacsiga, horumarka tikniyoolajiyadda, iyo tartanka - had iyo jeer waxaa jira mowduucyo cusub oo lagu daro maktabaddaada.
Markaad iskudareyso maqaallada duugga ah maqaalo cusub, oo dhameystiran, iska hubi inaad ku beddesho maqaalkii hore adoo dib u habeyn ku sameynaya. Had iyo jeer waxaan baaris ku sameeyaa sida maqaal kasta u qiimeeyo ka dibna uga faa'iideysto heerka ugu wanaagsan ee permalink ee maqaalka cusub. Markaan sidan sameeyo, makiinadaha raadinta badanaa way soo noqdaan oo waxay sare u qaadaan xitaa ka sarreeya. Markaa, markay caan noqoto, cirka ayay ku shareeraysaa darajo ahaan.
Ka fikir maqaalkaaga sida duuliye diyaaradeed oo soo caga dhigan doona. Duuliyaha diirada kuma saarayo dhulka… wuxuu marka hore raadinayaa astaamo, soo degaya, ka dibna wuxuu sii xoojinayaa inta diyaaradu hoos u dhaceyso.
Dadku markii hore ma akhriyaan qodob eray eray ahaan, iyagu scan waa Waxaad dooneysaa inaad ka faa'iideysato cinwaannada, geesinimada, xoojinta, xigashooyinka xannibaadda, sawirada, iyo qodobbada si wax ku ool ah. Tani waxay u oggolaan doontaa akhristayaasha indhaha inay iskaan ka dibna diirada saaraan. Haddii ay tahay maqaal aad u dhaadheer, waxaad xitaa rabi kartaa inaad kubilaabato shax kooban oo ah astaamo barroosinka meesha isticmaaleha uu gujin karo una boodi karo qeybta iyaga xiiseyneysa.
Haddii aad rabto inaad hesho maktabadda ugu fiican, bogaggaagu waa inay noqdaan kuwo la yaab leh. Mid kasta iyo qodob kasta waa inuu lahaadaa dhammaan waxyaabaha loo baahan yahay si uu si buuxda u saameeyo booqdaha oo uu u siiyo macluumaadka ay u baahan yihiin. Waa inay ahaato mid si wanaagsan loo abaabulay, xirfad leh, oo leh khibrad isticmaale oo aan caadi ahayn marka loo eego tartamayaashaada:
Ha iloobin Wicitaankaaga Waxqabadka
Mawduucu waxtar ma leh ilaa aad ka rabto qof inuu tallaabo ka qaado mooyee! Hubso inaad u ogeysiiso akhristayaashaada waxa ku xiga, dhacdooyinka aad la imaanaysid, sida ay u ballansan karaan ballan, iwm.
Tags: backlinkomaktabaddaContent Suuqistaraatiijiga suuqgeyntawax soo saarkadarajada googleimisa erey ayey tahay inuu qoraal blog ahaadoMaktabaddacilmisemrusheray tirinta